Ny Zafimaniry dia foko malagasy monina ao amin' ny tapany atsimo-atsinanan' ny faritra afovon' i Madagasikara, izay azo heverina ho zana-pokon' ny Betsileo, nefa mifanakaiky kolontsaina koa amin' ny Tanala. Mipetraka any amin' ireo tendrombohitra misy ala any amin' ny faritra afovoany atsimo-atsimo-atsinanan' Ambositra, eo anelanelan' ny Betsileo sy ny Tanala mifanila aminy, izy ireo. Miisa 100 eo ho eo ny tanànan' ny Zafimaniry, izay mahatratra 25 000 eo ho eo. Izy ireo dia miteny amin' ny fitenim-paritra amin' ny teny malagasy, izay sampan' ny vondrom-piteny malaiô-pôlineziana avy amin' ny fiteny baritô any atsimon' i Bôrneô.
Malaza amin' ny fahalalany sy ny kantony amin' ny asa sokitra hazo izy ireo, izay nampidirina tamin' ny taona 2003 tao amin' ny lisitry ny lova ara-kolontsaina tsy azo tsapain-tanana an' ny UNESCO. Efa fahita nanerana an' i Madagasikara io fomba fanaovana hazo io, saingy nihena noho ny fandripahana ala. Heverin' ny mpahay tantara ho fahafantarana ny zava-kanto taloha teto Madagasikara ny zavakanton' izy ireo.
1 Ny maha izy azy ny Zafimaniry
4.1 Fombafomba fandevenana
4.2 Dihy sy mozika
Ny maha izy azy ny Zafimaniry[hanova | hanova ny fango]
Trano hazo zafimaniry
Tombanana ho 25 000 ny Zafimaniry eto Madagasikara ankehitriny. Taranaky ny foko Betsimisaraka sy Tanala ny Zafimaniry, saingy samy hafa amin' ireo vondrom-poko roa ireo noho ny toerana onenany misy ny ala mando sy mangatsiaka. Heverin' ny Zafimaniry "tena izy", izay mbola miaina anaty ala sy mitazona ny fomba fiainany mahazatra, ho Betsileo ireo Zafimaniry any amin' ny faritra misy ny Zafimaniry teo aloha, izay efa ringana ny ala sady efa nanombohana fambolem-bary an-tanety.
Nifindra monina tany amin' ny ala mikitroka any atsimo-atsinanan' i Madagasikara ny Zafimaniry tamin' ny taonjato faha-18 noho ny fitomboan' ny fandripahana ala any amin' ny faritra hafa manerana ny Nosy.
Anisan' ny lasibatry ny valin' adin' ny miaramila frantsay ny tanànan' ny Zafimaniry nandritra ny fikomiana tamin' ny fitondrana mpanjanaka tamin' ny taona 1947, ka nahatonga ny mponina maro nandositra tany anaty ala ka tao izy ireo dia nifindrafindra monina nandritra ny roa taona. Tsy dia nandray anjara manokana tamin' ny fikomiana ny Zafimaniry nefa tena nijaly mafy satria teo amin' ny lalana nolalovan' ireo foko mpanentana ilay fikomiana avy any atsimo-atsinanana nandeha nihazo ny toby frantsay any amin' ny faritra afovoany no misy ny tanànan' ny Zafimaniry, ka nahatonga ny Frantsay hihevitra fa mpiray tsikombakomba ny Zafimaniry. Rehefa nampanjaka ny filaminana tamin' ny faritra maro tao amin' ny tanin' ny Zafimaniry ny tafika frantsay, dia nosamborin' izy ireo ny mponina teo an-toerana ary nalefany tany amin' ny toby fitanana, indraindray izy ireo nandoro tanàna koa.
Ny fiaraha-monina zafimaniry dia somary tsy tena misy ambaratongan-drafitra firy raha ampitahaina amin' ny an' ny Merina. Ara-tantara dia fanoherana ny fitondrana foibe izany. Amin' ny ankapobeny dia tsy mahery setra ny Zafimaniry ary manome lanja ambony ny fahaiza-miaina sy ny fahalalam-pomba, ary koa ny fahalemem-panahy eo amin' ny fifehezana ny ankizy.
Ny toetrandro ao amin' ny tanin' ny Zafimaniry dia ala trôpikaly an-tany avo, ka matetika mangatsiaka sy mando ny andro. Eo amin' ny haambo 1 000 - 1 800 m no misy io faritra io ary mazàna ny andro dia manjombona, ka 100 andro ihany no tsy misy orana isan-taona (2 000-3 000 mm ny orana voaray isan-taona). Antoetra no tanàna zafimaniry lehibe indrindra, izay misy mponina manodidina ny 1 000. Misy tanàna zafimaniry 17 lehibebe, ary manodidina ny 100 ny fitambaran' ny tanàn' ny Zafimaniry, ka Antoetra ihany aza no azo aleha amin' ny fiara.
Ny fanambadiana tokana sy ny fiainam-pianakaviana dia heverina ho ivon' ny fahamarinan-toeran' ny fiarahamonina zafimaniry. Ny lanja omena an' io fomba fijery momba ny fianakaviana io dia miseho amin' ny alalan' ny fanamboarana ny tranon' ny Zafimaniry sy ny fanaingoana azy. Ny vehivavy zafimaniry dia mazàna manambady aloha kokoa noho ny lehilahy ary lasa reny amin' ny fahatanorany. Mifanohitra amin' izany kosa ny zatovolahy izay miaina fahatanorana lava ka mandritra izany fotoana izany dia manao "asan' ny zatovolahy" izy ireo toy ny fihazana sy ny varotra lavitra. Malalaka ny fiarahan' ny tanora lahy sy vavy, ary na dia ny fanambadiana ara-dalàna aza dia mety hifarana tsy misy fahasarotana; ny fahaterahan' ny zaza no manamafy ny fanambadiana. Ny ray aman-dreny afaka mitaiza zaza betsaka dia heverina ho mahomby kokoa amin' ny maha-olon-dehibe. Mpitondra hajaina eo amin' ny fiarahamonina ny olon-dehibe indrindra eo amin' ny mpianakavy (ny raiamandreny) ary iey ireo no manome ohatra amin' ny fiarahamonina mirindra amin' ny alalan' ny fitenenana amim-pahatoniana sy amim-pahalalam-pomba, amin' ny alalan' ny fampiasana ny ohabolana sy ny fanajana ny razana.
Teo amin' ny tantara, ny Zafimaniry dia nisy sarangan' ny andevo, ary na dia nifarana tamin' ny fomba ôfisialy tamin' ny fanjanahan-tany frantsay tamin' ny taona 1896 aza ny fanandevozana (nefa tsy tena nifarana ny fanao raha tsy tamin' ny tapak' ireo taona 1930), dia mbola nanondro ny taranak' io vondrona io ho anisan' ny andevo ny Zafimaniry. Tsy niparitaka nanerana ny tanin' ny Zafimaniry na fananan' ny isam-batan' olona ireo anisan' ny kilasin' ny andevo ireo, izay tsy mihoatra ny 10 %n' ny mponina ary amin' ny ankapobeny dia babo (anisan' izany ny vahiny) sy Zafimaniry netry voninahitra. Nivondrona tao amin' ny tanàna roa fotsiny izy ireo izay nanana anjara toerana tamin' ny fampiantranoana karazana fitsarana izay nandaminana ny disadisa, ny lehibe indrindra dia Antetezandrotra. Izy ireo dia nanompo ireo sampan-draharaham-pitantanana ireo tamin' ny alalan' ny fakana sira avy any amin' ny morontsiraka sy tamin' ny alalan' ny asa hafa, saingy amin' ny fiainana andavanandro dia tsy misy hafa amin' ny Zafimaniry afaka izy ireo. Na dia izany aza, dia tsy mifampaka vady ireo vondrona roa ireo. Tsy nahazo tany ny andevo raha tsy avy amin' ny Zafimaniry afaka izay nanome azy ireo izany, ary tany efa reraka navelan' ny olona afaka izany, izay mety mbola ahafahan' ny vomanga haniry.
Andrasana ny hanambady Zafimaniry hafa ny saranga Zafimaniry afaka mba hisian' ny fiaraha-miombon' antoka ara-tsôsialy ahafahan' izy ireo mahazo tany vaovao hovolena. Satria tsy afaka nanambady Zafimaniry afaka ny taranaky ny andevo, mba hahazo tany, dia matetika izy ireo no maka vady avy amin' ny andevo taloha any amin' ny faritra nifindrany isan-taona anaobany asa ikaramana. Noho izany ny taranaky ny andevo dia manana havana maro any ivelan' ny tanin' ny Zafimaniry ary afaka mandefa ny zanany hiara-mipetraka amin' ny havany hianatra amin' ny sekoly ambony any ivelan' ny tanin' ny Zafimaniry; noho izany ny taranaky ny andevo zafimaniry dia nahita fianarana ambony kokoa noho ny an' ireo Zafimaniry afaka.
Tany am-boalohany dia tsy nanana fivavahana voafaritra tsara ny Zafimaniry. Manodidina ny fanajana ny razana sy ny Zanahary ny finoana nentin-drazana. Ity Zanahary ity no nadikan' ny misiônera eorôpeanina hoe "God" (anglisy) na "Dieu" (frantsay), saingy hery tsy miraharaha, tsapa amin' ny toerana rehetra, mitovitovy amin' ny lahatra na ny anjara, ary miseho amin' ny alalan' ny herin' ny zavaboary. Nanomboka tamin' ny faramparan' ny taona 1800, dia nanomboka nanova ny tanànan' ny Zafimaniry ho Prôtestanta ny misiônera tao amin' ny London Missionary Society. Ny misiônera zezoita koa dia nanao antso avo tamin' ny Zafimaniry tamin' ny tapak' ireo taona 1930, indrindra fa ireo tao amin' ny kilasin' ny andevo vao afaka, izay voalohany niova fo ho Katôlika.
Malaza ny Zafimaniry noho ny fahaizany miasa hazo. Ny tranon' izy ireo dia vita amin' ny hazo manontolo tsy misy fantsika. Ny trano sy ny kojakoja hazo hafa rehetra, ao anatin' izany ny fanaka, ny fasana ary ny fitaovana dia voaravaka endrika ara-jeômetra izay ahitana fifangaroan' ny fahaizana arabo sy aostrôneziana. Tsy toy ny ankamaroan' ny foko hafa eto Madagasikara ny Zafimaniry izay manome lanja bebe kokoa ny fanorenana trano (fa tsy ny fasana) izay mateza sy voaravaka tsara. Apetaka amin' ny afo mba ho mafy ny hazo hanamboarana fantsona sy zana-tsipìka. Mampiasa karazana hazo 20 mahery, izay samy manana ny toetrany manokana sy ny fampiasana azy, ny mpanao hazo. Tany aloha dia niely manerana an' i Madagasikara ity fomba fandrafetana hazo ity, saingy efa maty ny ankamaroany ary ny ankamaroany dia voatahiry ao amin' ity foko ity ihany. Tamin' ny taona 2008, ny fanaovana hazo zafimaniry dia voarakitra ao amin' ny lisitry ny UNESCO momba ny lova ara-kolontsaina tsy azo tsapain-tanana ho an' ny olombelona.
Heverina ihany koa fa mbola nitazona ny fomba amam-panao sy ny kolontsaina malagasy tany am-boalohany izay efa maty any amin' ny faritra hafa manerana ny Nosy ny Zafimaniry. Misy ifandraisany, ohatra, ny lanonana famorana sy ny fahafatesana; refesina ara-pomba ho an' ny vatam-paty ny zaza hoforana alohan' ny hanaovana ny fandidiana. Manao tsangam-bato ho fahatsiarovana ny razana na ny zava-nitranga manan-danja teo amin' ny fiainan' ny razana koa izy ireo. Lamba hodi-kazo nokapohina no anaovana ny akanjo nentim-paharazana.
Atao anaty fasana hazo apetraka any anaty ala ny maty. Matetika ady tolona ara-pombafomba mitovitovy amin' ny dihy no atao amin' ny lanonam-pandevenana zafimaniry.
Ny lokanga no zavamaneno tena tian' ny Zafimaniry. Manandindona ny vatam-paty ny endriny.
Ny Zafimaniry dia miteny ny teny malagasy tahaka ny an' ny foko malagasy sisa. Saika mitovy amin' ny an' ny Betsileo ny fiteniny, izay manamorona azy ireo any andrefana.
Ara-tantara dia mpiasa hazo avokoa ny mpiara-monina rehetra. Na izany aza, ny fandripahana ala be dia nampihena ny fisian' ny hazo, nampihena ny asa fivelomana mifototra amin' io fahaiza-manao io. Tao anatin' ny taona vitsivitsy izay, ny tanànan' ny Zafimaniry dia nampiroborobo ny fizahàn-tany mba hahazoana fidiram-bola, saingy io fomba fivelomana vaovao io dia manova ny toetran' ny fiarahamonina izay somary nitokana teo aloha. Ny fizahàn-tany dia ahafahan' izy ireo mivarotra asa tanana vita sokitra amin' ny hazo amin' ireo mpitsangantsangana mandalo, ary mivarotra ireo entana ireo amin' ny mpamatsy izay mivarotra izany any amin' ny tanàna lehibe akaiky toa an' Ambositra. Ny kilasin' ny andevo taloha, izay niova finoana ho katôlika, dia nanao ampihimamba ny fivarotana asa tanana vita amin' ny hazo amin' ny mpizaha tany hatramin' ireo taona 1970, satria ny famokarana faobe ireo zavatra ireo dia nokarakarain' ireo niova fo ho Katôlika teo an-toerana ireo niaraka tamin' ny fanohanan' ny fiangonana; na dia efa tafiditra ao anatin' io sehatra io aza ny ankamaroan' ny Zafimaniry amin' izao fotoana izao dia mbola manjaka amin' ny famokarana sy ny fizarana ary ny fivarotana ny taranaky ny andevo taloha. Maka hazo ao anaty ala koa ny Zafimaniry mba hamidy. Ny ankamaroan' ny mpitari-dalana ny mpizaha tany izay mikarakara ny fitsidihan' ny mpizahatany any amin' ny tanànan' ny Zafimaniry dia avy amin' ny tanànan' ny andevo taloha ao Antetezandrotra.
Vehivavy zafimaniry manapy vary
Ny katsaka sy ny tsaramaso no tena volen' ny Zafimaniry ary niantehitra amin' ny tavy izy ireo taloha. Mandany 22 andro isan-taona ny Zafimaniry amin' ny fanadiovana ny tanim-boly amin' ny alalan' ny tavy, fa ny andro sisa tavela dia atokany amin' ny asa fitadiavam-bola hafa toy ny fanaovana sokitra hazo na ny fitadiavana asa hikaramana any an-kafa. Voly fototra ataon' ny Zafimaniry ankehitriny ny katsaka, izay efa 200 taona teo ho eo izay angamba no nisahanan' izy ireo azy. Dorana isan-taona ny tanimboly amin' ny fiandohan' ny taom-pambolena, ary ambolena mandritra ny efa-taona ka hatramin' ny folo taona vao lany hery ny fahavokarany ary avela ho maina mandritra ny dimy taona eo ho eo vao ambolena indray. Rehefa mihena ny fahalonahan' ny tany tany, dia ajanona ny fambolena katsaka sy tsaramaso, fa ny ovy sy vomanga no asolo izany. Ny mangahazo no volena farany eny amin' ny tanimboly alohan' ny hamelana azy hiala sasatra amin' ny fararano; ampiasain' ny Zafimaniry amin' ny zavatra hafa, toy ny fiompiana omby, ny fambolena zavamaniry fanao fanafody, ny fambolena zavamaniry sy kirihitra ary hazo tsy fihinana mba hakana tsiraka sy akora fanamboaran-trano. Aorian' ny fitopolo taona isian' io tsingerina mahavokatra io, dia najanon' ny Zafimaniry tanteraka ny fambolena amin' ilay tany ary avelany ho lasa kijana maharitra. Mameno ny katsaka sy ny saonjo ary ny tsaramaso amin' ny vokatra nangonina eny amin' ny ala manodidina izy ireo, indrindra fa ny tantely sy ny orana (Astacoides madagascariensis).
Somary nahitam-pahombiazana ihany koa ny ezaka natao vao haingana tamin' ny fampidirana ny fampitomboana ny vokatra amin' ny fanamafisana fambolem-bary isan-taona amin' ny tanimbary tsy miova. Nanamora ny fambolena vary ao amin' io faritra mangatsiaka io tato anatin' ny folo taona farany ny fiakaran' ny maripanan' ny tany. Ny faharerahan' ny tanin' ny Zafimaniry amin' ny fambolena nentim-paharazana mifindrafindra no tena anton' izany, ka nanery ny Zafimaniry hitady fomba hanaovana ny fambolem-bary na dia eo aza ny toetran' ny tanin' izy ireo izay be tendrombohitra. Ny tany sy ny toetrandro dia mitaky fanaobana farafaran-tany sy fitarihan-drano be pitsiny izay tsy ananan' ny mponina ao an-toerana fahalalana ampy amin' ny fanamboarana azy, ka tsy maintsy manakarama Betsileo izy ireo hanamboatra ny tanimbary. Ny ankabeazan' ny vola miditra amin' ny Zafimaniry dia ampiasaina amin' ny fanamboarana farafaran-tany ho an' ny fambolem-bary.
Bloch, Maurice (1995). "Devenir le paysage: La clarté pour les Zafimaniry". In Voisenat, Claudie (ed.). Paysage au pluriel: Pour une approche ethnologique des paysages. Paris: Les Éditions de la MSH. pp. 89–104. ISBN 9782735106844.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Zafimaniry&oldid=1043253"
Voaova farany tamin'ny 24 Janoary 2022 amin'ny 10:35 ity pejy ity.